Marka 9: 1-50
Toriteny na fanazavàna - "Qui est le plus grand?" "
Marka 8 Marka 9 Marka 10
Ary niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe: Raby ô, tsara raha mitoetra eto isika; ary aoka hanao lay telo izahay: ny anankriray ho Anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Elia.
Dia nanontany an'i Jesosy izy ka nanao hoe: Lazain'ny mpanora-dalàna fa Elia tsy maintsy ho avy aloha.
Ary Izy nanao taminy hoe: Elia dia avy aloha ihany ka mampody ny zavatra rehetra. Ary ahoana koa no nanoratana ny amin'ny Zanak'olona fa tsy maintsy mijaly mafy Izy ka hatao tsinontsinona?
Nefa lazaiko aminareo: Efa tonga Elia sady nataon'ny olona taminy izay sitraky ny fony araka ny nanoratana azy.
Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namaly ka nanao hoe: Mpampianatra ô, nentiko ho ety aminao ny zanako-lahy, izay azom-panahy moana;
ary na aiza na aiza no ahazoany azy, dia ampihinjitsinjiriny izy, ary mandoa vory, dia mikitro-nify sady valaka dia valaka; ary niteny tamin'ny mpianatrao aho mba hamoaka izany; fa tsy hainy.
Ary Jesosy namaly azy hoe: Ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo? Mandra-pahoviana no handeferako aminareo? Ento ety amiko izy.
Ary niaraka tamin'izay dia niantsony rain-drazazalahy ka nanao hoe: Mino aho; vonjeo aho ho afaka amin'ny tsi-finoako.
Ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy, dia nanontany Azy mangingina ny mpianany hoe: Izahaytsy nahavoaka azy.
Ary hoy Izy taminy: Iny karazana iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona, afa-tsy amin'ny fivavahanaihany.
Fa nampianatra ny mpianany Izy ka nanao taminy hoe: Ny Zanak'olona dia hatolotra eo an-tànan'ny olona ka hovonoiny, ary rehefa voavono Izy, dia hitsangana rehefa afaka hateloana.
Ary tonga tao Kapernaomy izy; ary rehefa mby tao an-trano Jesosy, dia nanontany ny mpianany hoe: Inona no niadianareo hevitra teny an-dàlana?
Fa tsy nahateny izy, satria efa niady hevitra teny an-dàlana izy ny amin'izay lehibe indrindra.
Ary rehefa tafapetraka Jesosy, dia niantso ny roa ambin'ny folo lahy Izy ka nanao taminy hoe: Raha misy te-ho voalohany, dia hatao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy.
Fa na iza na iza no manome anareo rano eran'ny kapoaka hosotroinareo, satria an'i Kristy hianareo, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany.
Ary raha ny tànanao no manafintohina anao, tapaho izy, fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tànana roa, nefa hariana any amin'ny helo,dia any amin'ny afo tsy azo vonoina.
Ary raha ny tongotrao no manafintohina anao, tapaho izy; fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa, nefa hariana any amin'ny helo,any amin'ny afo tsy azo vonoina
Ary raha ny masonao no manafintohina anao, esory hiala izy; fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa, nefa hariana any amin'ny helo
any ny kanakany tsy maty, ary ny afo tsy vonoina.
Fa samy ho voasira amin'ny afo izy rehetra.
Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no ho entinareo mampody ny tsirony? Aoka hisy sira ao anatinareo, ka mihavàna tsara hianareo.